Monday, 8 Jan, 2018 9:34 AM
राष्ट्रियसभा सदस्य छान्नका लागि निर्वाचन आयोगले दललाई १५ दिनको म्याद दिएको छ । उसले ३\_७\_९ वा २१ दिनजति दिए पनि हुन्थ्यो तर १५ दिन नै किन तोक्यो ? एकातिर प्रदेश प्रमुख तोक्न, निर्वाचनको मिति तय गर्न सरकारलाई भनेको छ । न्याय परिषद्लाई निर्वाचन अधिकृत तोकिदेऊ भनेको छ । यो सरकारले यी सबै काम किन हतारोका साथ गर्छ ? जबसम्म सांसदले शपथ खाने, चुनावको मिति तोक्नेलगायतका काम हुँदैन तबसम्म नयाँ सरकार गठन हुँदैन भन्नेमा देउवा सरकार ढुक्क छ । सत्ता कब्जा गर्नलाई सैनिक ‘कू’ नै हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन रहेछ । एकातिर वामपन्थीहरू सत्तामा पुगे भने अधिनायकवाद लागू हुन्छ भन्ने अर्कातिर हारेपछि आफैं सरकार नछाड्ने ! यस्तोमा अधिनायकवादको परिभाषा के रहेछ भनेर बुझ्नैपर्ने भएको छ । यही कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले ०४८ साल वैशाख २९ गते आम चुनाव गराए । त्यसबेला पार्टीले जित्यो तर उनी स्वयंले भने हारे । परिणाम आउँदाआउँदै २ दिनमै राजीनामा दिए ।